← सरकारी निर्लज्जताको पराकाष्ट ,जिवन धान्नकै निम्ती अपाङ्ग महिलाहरु यौन पेसामा	राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा अपाङ्गको नाममा आएको रकममा हिनामिना भएको बारेमा नलेख्न पत्रकारलाई धम्की →	अपाङ्गको नाममा भित्रीएको डलरमा एनजिओ र आइएनजिओको रजाँई,सेमिनार र गोष्ठीको नाममा आधा रकम होटल र क्याफेमा स्वाहा	02
रत्नपार्कमा कला देखाए माग्ने अपाङ्ग र डोरीले बाँधेर कोठा भित्र जिवन बिताउने अपाङ्गको निम्ती एनजिओ र आइएन जिओ को होटेलका सेमिनार र गोष्ठीले के फाइदा पुग्छ ? अपाङ्गको नाममा भित्रीएको आधा रकम होटलमा सेमिनार र गोष्ठीमा सकीने गर्दछ त्यो के का निम्ती हो ? होटलका सेमिनार र गोष्ठीको साँटो एउटा सामान्य हल वा कुनै कोठामा बसेर मिटीङ गरेर बचेको पैसा अपाङ्गको निम्ती किन खर्च गर्न सकिन्न ? होटल र क्याफेमा सेमिनार गरेर उनिहरुले कस्को हितको निम्ती पैसा खर्च गरीरहेका छन् ? अव अपाङ्गता भएका साथीहरु पनि एक जुट भएर त्यस्ता एनजीओ र आइएजजीओ माथी कडा प्रतिबाद गर्नुै पर्ने हुन्छ । सिमीत अपाङ्गहरुको ठेकेदार ठान्नेहरुले बिदेशी दाताहरुमाझ पुगेर करोडौ रुपैयाँ यहाँ भित्र्याई रहेका छन् त्यसको कुनै हिसाव किताब छैन । आएको पैसाले सेमिनार गोष्ठी र आफनै पोल्टो भर्ने काम गरेका छन् । बषौ देखि खुलेका ति एनजीओ र आइएनजिओ ले अपाङ्गका निम्ती हित हुने के कति काम गरे ? हाम्रो प्रश्न उनिहरुलाई छाडदै अग्निबाँणले आगामी अंकबाट त्यस्ता डलर कुम्ल्याउने संस्थाहरुको पर्दाफाँस गदै जाने छ । प्रतिक्षा गदै जानु होला । Like this:Like Loading...
← सरकारी निर्लज्जताको पराकाष्ट ,जिवन धान्नकै निम्ती अपाङ्ग महिलाहरु यौन पेसामा	राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा अपाङ्गको नाममा आएको रकममा हिनामिना भएको बारेमा नलेख्न पत्रकारलाई धम्की →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...